Itoobiya oo si weyn uga soo horjeedsatay doorashada Tigreega | Berberanews.com
Home WARARKA Itoobiya oo si weyn uga soo horjeedsatay doorashada Tigreega
Itoobiya oo si weyn uga soo horjeedsatay doorashada Tigreega
Aqalka sare ee dalkaasi Itoobiya ayaa cod buuxa uga soo horjeestay doorashada la filayo deegaanka Tigreega iney arbacada horteenna ah ka qabsoonto ay tahay mid dastuurka ka horimaneyso isla-markaana aan la aqbali doonin natiija kasta oo doorashadaasi ka soo baxdo.
Golaha Federeeshiinka ee dalkaasi Itoobiya oo maalinti shalay shir degdeg ah ka yeeshay amuurtan wuxuu sheegay dhaqdhaqaaqyada ka socda ismaamulka deegaanka Tigreega uu ku doonayo doorasha ka duwan dalka intiisa kale ka duwan uu deegaan ahaan iskii u qabsado ay tahay mid gabi ahaanba ka horimaneyso dastuurka dalka Itoobiya u yaalla iyo shuruucda doorashda.
Go’aannada deegaanka Tigreeda ka soo baxay ee la xiriiro doorashada iyo howlaha doorashada la xiriira dhammaantood maanta dastuurka dalka oo ah sharciga dalkaasi ugu sarreeya ay ka horimanayaan ma noqon doonaan kuwo dhaqan galo.
Golaha Fedreeshinka ee dalkaasi Itoobiya oo shirka degdegga oo ay albaabbada u xirnaayeen maalinti shalay yeeshay wuxuu dhageystay warbixin ay u soo jeediyeen guddiga joogtada ee macneynta arrimaha dastuurka.
“Arrimaha sharcidarrada ee ka socda deegaanka Tigreega dartii shacabka deegaankaasi iney dhibaato soo gaarto looma baahna, wixi dhib ee jirana goluhu wuxuu aaminsan yahay iney wadahadal iyo isafgarasho lagu dhammeeyo, goluhuhna wuxuu dhiirragelinayaa dadaal kasta oo ismariwaaga taagan xal looga raadinayo” ayuu yiri.Golaha Federeeshiinka wuxuu maamulka deegaanka Tigreega iyo xisbiga talada deegaankaasi haya ee TPLF uu ugu baaqay iney joojiyaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo gabood fallada ay u geysanayaan shacabka deegaankaasi ee la xidhiidha doorashada deegaankaasi uu qorsheynayo inuu si gooni ah uu u qabsado.
Doorashada guud ee dalkaasi Itoobiya ka dhici lahayd bishan Sptember ayaa dib loo dhigay kaddib marki ay labada gole ee dalkaasi cod aqlabiyad ah ay ku meel mariyeen in doorashada dib loo dhigo 9 bilood ilaa iyo sanad.
Hase yeeshee, deegaanka Tigreega ayaa markiba ka soo horjeestay go’aankaasi isla-markaana inuu yahay go’aan dastuurka ka horimanayo doorasha u gooni ahna uu deegaan ahaan u qabsanayo.
Sida uu qorsheynayo deegaanka Tigreega doorasha u gaar ah ayaa waxay ka dhici doontaa Arabacada oo ku beegan 9-ka bisha September.
Falcelinta dowladda dhexe ee ka dhalatay doorashada deegaanka Tigreega
Ra’isal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa sheegay iney dowladdu qaadeyso tallaabbo kasta oo ay kaga hortageyso dhaqdhaqaqyada dastuurka dalka ka horimanaya.
Ra’isal waraare Dr Abiy Axmed oo ka hadlay hadalka ka soo yeeray deegaanka Tigreeda oo ay ku sheegeen iney doorasha gaar ah deegaan ahaan u qabsanayaan oo ay sugeynin doorashada guud ee dib loo dhigay wuxuuna yiri:
“Si ka baxsan dastuurka dalka Itoobiya u yaallo dhaqdhaqaaq kasta oo ka hormarinayo ay tahay khalad aad u weyn ayna xadgudub ku tahay shuruucda dalka iyo kan caalamka intaba.”
“Sida uu dhigayo dastuurka dalka Itoobiya qodobkiisa 50-aad ee faahfaahinayo awoodda iyo waajibaadka dowladda federaalka inaan dastuurka difaacno waxkasta oo ka horimanayana aan ka hortagno diyaar ayaan u nahay” ayuu yiri.
“Si ka baxsan dastuurka dalka inuu deegaan si gaar ah doorasha iskii u qabsado maadaamaa ay ammaanka dalka iyo dadka ay waxyeello aad u weyn u geysaneyso dowladdu waxay ku qasban tahay iney qaaddo tallaabba kasta oo iskudayga noocasi looga hortagayo.”
“Xisbi kasta oo siyaasadeed oo doonaya inuu xukunka siyaasadeed uu qabto waa inuunan marin waddo dalka iyo dadka dhibaata u horseedeyso.”
“Cid kasta oo doorasha aan sharciga waafaqsaneen iney qabato dooneyso, isla-markaana damacsan iney awoodda deegaan xoog ku qabsato dowladda federaalka wixii hadda ka dambeeyo uma dul qaadaneyso, tallaabba kasta inaan qaadanana diyaar ayaan u nahay” ayuu yiri Ra’isal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed.Xigasho Bbc Somali
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo kulan la yeeshay ururada bulshada
Next articleXisbiga Kulmiye oo iska difaacay eedo uu u jeediyay Qabo
Taliska Afrika ee Maraykanka oo ka hadlay Duqeyn ay la fuliyeen Somalia
Khabiir cadeeyey in Maraykanku qorshaynaayo Saldhig Millateri oo uu Berbera ka samaysto
Taliska Afrika ee Maraykanka oo ka hadlay Duqeyn ay la fuliyeen...
Khabiir cadeeyey in Maraykanku qorshaynaayo Saldhig Millateri oo uu Berbera ka...
Xildhibaan Cabdirashiid oo ka jawaabay hadallo ka soo yeedhay Xoog
“Dalka Somaliland debeddaa laga xoreeyay” Faysal Cali-waraabe
Fanaanka la tartamaya mid ka mid ah hoggaamiyayaasha ugu xukunka dheer...
Congresska oo u codeeyay xil-ka-qaadis iyo Trump oo soo saaray bayaan
Ingiriiska: 1,564 qof oo 24 saac u dhintay coronavirus
Buuhoodle: Dabley Hubaysan oo toogasho ku dilay 1 qof mid Kalena...
Jigjiga: Maalqabeen u dhashay Sucudiga oo 2 Milyan ku maalgelinay mashaariic
Congreska Oo Xilka Ka Qaadaya Trump Iyo Xiisada Kala Qaybsanaanta ee...
Wasiirkii hore ee Arrimaha Debedda Itoobiya oo la dilay
Shirkadaha isgaadhsiinta oo 30 cisho loo qabtay inay ruqsad cusub qaataan
Somaliland oo lagu wareejiyay Cusbital Imaaraadku ka dhisay Burco
“Madaxweynaha Somaliland waa dhaqan yaqaan” Marwo Hinda Gaani